‘स्तन’ आर्कषक देखाउन कुन उमेरका महिलाले कस्तो ब्रा लगाउने ?
महिलाको शरीर र सुन्दरतामा स्त-नको भुमिका मुख्य हुन्छ । महिलाको शरीर आर्कषक देखाउन स्त-नको भुमिका रहने गर्दछ ।
तर जानअन्जानमा महिलाले प्रयोग गर्ने ब्राका कारणले कतिपय समस्या आउनसक्छ । यस्तोमा कुन उमेरका महिलाले कस्तो ब्रा लगाउँदा स्त-न आर्कषक देखिन्छ त ?
१८ देखि २५ बर्षको उमेरसम्म महिलाको स्तनको आकार निकै आकर्षक र कसिलो हुन्छ । यो उमेरमा प्रयोग गरिने ब्रा सहि आकार र प्रकारको हुन आवश्यक छ । यो उमेरमा दिउँसो वा वर्किङ टाइममा सपोर्टिव ब्रा पहिरीएमा यसले स्त-नको सौन्दर्यलाई कायम राख्दछ । तर व्यायामका समयमा भने स्पोर्टस् ब्रा पहिरिनु पर्दछ ।
प्रायः २५ देखि ३५ बर्षको उमेरसम्म अधिकाशं महिलाको विवाह हुने र लगभग गर्भवती भइसकेका हुने गर्दछन् । यस्तोमा गर्भाअवस्थाका बेला स्त-नको अकार बढद्छ र स्ट्रचे माक्र्स आउँछ । त्यसैले यो उमेरमा हल्का व्यायम गरेर तौललाई नियन्त्रण गरी सर्पोटिभ ब्रा लगाउनु पर्छ । तर स्त-नपान गराइरहेका महिलाले भने मेटरिनिटी ब्रा लगाउनुपर्छ ।
३५ बर्षपछि उमेर बढेसँगै महिलाको स्तन-को आकार र दुध ग्रन्थी पनि सुक्दै जान्छ । यससँगै स्त-न सिथिल हुन्छ र झोलिएको देखिन्छ । त्यसैले यो अवस्थामा भने पुशअप ब्रा लगाउनुपर्छ । यसले स्त-नलाई क-सिलो देखाउँछ । तर स्तनमा दाग वा नि-ल-डा-म बस्ने गरीको कसिलो ब्रा भने लगाउनु हुदैँन ।
यो पनि- टाउको दुःखाईको समस्या छ ? घरेलु खानपानबाटै यसरी हुन सक्छ बिसेक
आजकल टाउको दुख्ने स-मस्या आम समस्या बनेको छ । गर्मी, कामको चाप, चिन्ता तथा अन्य कारणले पनि टाउको दुख्ने गर्दछ ।
सामान्यतयाः मानिसहरु टाउको दुख्ने वित्तिकै आफखुसी पेन कि-लर किनेर खाने गर्दछन् । तर यस प्रकारको औष-धी सेवनले स्वास्थ्यमा विस्तारै असर देखा पर्दछ । तसर्थ टाउको दु-खाईबाट बच्न घरेलु उपाय अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।
१. अदुवाको चिया
अत्यन्त धेरै टाउको दु-ख्यो भने अदुवा हालेको चिया पिउनु लाभदायक हुन्छ । अदुवामा हुने एन्टी–इन्फ्लेमेटरी तत्वले दुखाई लाई कम गराउँन भुमिका निर्वाह गर्दछ ।
टाउको दुख्ने समस्याबाट राहत पाउन कफिको सेवन पनि उपयोगी हुन्छ । कफिमा पाइने क्याफिनले दुखा-ई कम गराउँछ । यसले पेन किलरको काम गर्छ ।
पटकपटक टाउको दुख्ने समस्या छ भने टाउकोलाई तेलले मसाज गर्नु पर्दछ । मसाज गर्दा कपालको जरासम्म तेल लगाएर हल्का पटक पटक टाउको दुख्ने समस्याबाट लाभ मिल्दछ ।
४. गाईको दूध
यदि औषधी सेवनले समेत टाउको दु-खाई नियन्त्रण भइरहेको छैन भने नियमित गाईको दूध पिउनुहोस् । मन तातो दूध पिउँदा टाउको दुख्ने समस्या विस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
साधारण टाउको दुखाईबाट राहत पाउन एक गिलास पानी पनि उपयोगी हुन्छ । अझ मनतातो पानीमा कागतीको रस हालेर पिएमा टाउको दु-खाई बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
६. चिनी र धनियाँ
रुघाखोकी वा ज्वरोका कारण टाउको दु-खेको खण्डमा चिनी र धनियाँको पाउडर मिसाएर बनाएको एक गिलास पानीको घोल पिउँदा तत्काल आराम मिल्दछ ।